MDC Inoti SADC Ngaipindire paNyaya yeZimbabwe
Chivabvu 15, 2008
Munyori mukuru weMDC, VaTendai Biti, vanoti bato ravo harisi kufara zvachose nedanho ratorwa Zimbabwe Electoral Commission, ZEC, rekuti sarudzo yemutungamiri wenyika, idzokororwe mukati memazuva makumi mapfumbamwe kubva musi waburitswa zvakabuda musarudzo yemutungamiri wenyika. VaBiti vataura mashoko aya pamusangano wavaita nevatori venhau muJohannesburg, South Africa neChina.
Mutori wedu wenhau weStudio 7, Benedict Nhlapho, uyo ari muJohannesburg South Africa, anoti VaBiti vati SADC inofanira kupindira panyaya iyi.
Ukuwo imwe nhengo yedare repamusoro soro reZanu-PF, VaJoramu Gumbo, vanoti sarudzo yemutungamiri wenyika ingangoitwa mwedzi unotevera. Asi VaGumbo vatiwo Zanu-PF yakatomirirawo kunzwa kubva kuZEC kuti musi upi chaiwo uchaitwa sarudzo iyi.
Dare reZanu-PF repamusoro soro rakagara neChitatu rikazeya nezvesarudzo iyi, uye inoti yakagadzirira kuita sarudzo. Dingindira rayo rinenge riri rekuti vanhu vanofanira kuzvishandira vachiwaniswa hupfumi nebato iri, uye kuwana rusununguko ruzere.
VaGumbo vaudza mutori wenhau Blessing Zulu weStudio7 kuti sarudzo yemutungamiri wenyika ingangoitwa mwedzi unouya.